प्रेषित ४ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
४ पत्रुस र यूहन्ना मानिसहरूसित कुरा गरिरहेको बेला मुख्य पुजारीहरू, मन्दिरका पालेहरूको नाइके अनि सदुकीहरू अचानक त्यहाँ आइपुगे। २ तिनीहरू चिढिएका थिए, किनकि पत्रुस र यूहन्ना मानिसहरूलाई सिकाउँदै थिए अनि येशू मृत्युबाट ब्यूँतनुभएको घटनालाई उदाहरणको रूपमा चलाएर पुनर्जीवनको विषयमा घोषणा गरिरहेका थिए। ३ तब तिनीहरूले उनीहरूलाई पक्रेर भोलिपल्टसम्म हिरासतमा राखे, किनकि त्यतिखेर साँझ परिसकेको थियो। ४ तथापि, उनीहरूको कुरा सुन्ने थुप्रै मानिसले विश्वास गरे अनि चेलाहरूको सङ्ख्या लगभग पाँच हजार पुग्यो। ५ भोलिपल्ट यरूशलेममा यहूदीहरूका शासक, धर्म-गुरु अनि शास्त्रीहरू भेला भए। ६ मुख्य पुजारी हन्नास, कैयाफा, यूहन्ना, अलेक्जेन्डर अनि मुख्य पुजारीका थुप्रै आफन्त पनि त्यहाँ भेला भएका थिए। ७ अनि पत्रुस र यूहन्नालाई बीचमा उभ्याएर तिनीहरूले केरकार गर्न लागे: “तिमीहरूले कसको अख्तियार पाएर वा कसको नाममा यो काम गऱ्यौ?” ८ तब पवित्र शक्तिले भरिएर पत्रुसले तिनीहरूलाई भने: “हे इस्राएलका शासक अनि धर्म-गुरुहरू हो, ९ हामीले एक जना अपाङ्ग मानिसलाई निको पारेर जुन असल काम गऱ्यौं, त्यो कसको नाममा गरेका हौं भनेर यदि तपाईंहरू अहिले हाम्रो केरकार गर्दै हुनुहुन्छ भने, १० तपाईंहरू अनि इस्राएलका सबै मानिसहरूलाई यो थाह होस्, नासरी येशू ख्रीष्ट, जसलाई तपाईंहरूले खम्बामा टाँग्नुभयो तर परमेश्वरले मृत्युबाट ब्यूँताउनुभयो, हो, उहाँको नाममा यो मानिस सद्दे भएर तपाईंहरूसामु खडा भएको हो। ११ उहाँ नै ‘त्यो ढुङ्गो हुनुहुन्छ, जसलाई तपाईं डकर्मीहरूले कुनै मूल्यको ठान्नुभएन, तैपनि उहाँ कुनाको शिरढुङ्गो बन्नुभएको छ।’ १२ साथै, उहाँबाहेक अरू कसैद्वारा उद्धार हुन सक्दैन, किनकि स्वर्गमुनि मानिसहरूमध्ये कसैलाई अर्को कुनै नाम दिइएको छैन, जुन नाम लिएर हामीले उद्धार पाउन सक्छौं।” १३ जब तिनीहरूले पत्रुस र यूहन्नाको साहस देखे र दुवै जना अशिक्षित अनि साधारण मानिस रहेछन्‌ भनी बुझे, तब तिनीहरूले अचम्म माने अनि उनीहरू येशूसित हिंडडुल गर्नेगर्थे भनी तिनीहरूले थाहा पाए। १४ अनि निको भएको त्यस मानिसलाई जब तिनीहरूले आफूसामु उभिरहेको देखे, तब तिनीहरू नाजवाफ भए। १५ त्यसैले तिनीहरूले उनीहरूलाई यहूदी न्यायपरिषद् भवनबाहिर जान आज्ञा गरे अनि आपसमा यसो भन्दै छलफल गर्न लागे: १६ “यी मानिसहरूलाई हामी के गरौं? किनकि तिनीहरूले उल्लेखनीय चमत्कार गरेका छन्‌ अनि यरूशलेमका सबै बासिन्दाहरूले त्यो देखेका छन्‌। त्यसैले हामी त्यसलाई इन्कार गर्न पनि सक्दैनौं। १७ यसकारण, यो कुरा अझ अरू पर नफैलियोस् भन्नको निम्ति आइन्दा यस नाममा कुनै मानिससित कुरा नगर्नू भनेर तिनीहरूलाई हामी धम्क्याऔं।” १८ त्यसपछि तिनीहरूले उनीहरूलाई बोलाए अनि येशूको नाममा कतै पनि एक शब्द नबोल्नू अनि कसैलाई नसिकाउनू भनी आज्ञा दिए। १९ तर पत्रुस र यूहन्नाले तिनीहरूलाई यस्तो जवाफ दिए: “परमेश्वरको नजरमा कुन ठीक हो, तपाईंहरूको कुरा सुन्नु कि परमेश्वरको, तपाईंहरू आफै निर्णय गर्नुहोस्। २० तर जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ, हामी आफूले देखेको अनि सुनेको कुरा नबोली बस्न सक्दै सक्दैनौं।” २१ त्यसैले उनीहरूलाई अझै धम्क्याएर तिनीहरूले छोडिदिए, किनकि उनीहरूलाई सजाय दिने कुनै आधार तिनीहरूले भेट्टाएनन्‌। यसबाहेक जे घटना भयो, त्यो देखेर मानिसहरूले परमेश्वरको महिमा गरिरहेको हुनाले तिनीहरू मानिसहरूदेखि पनि डराएका थिए। २२ किनकि चमत्कारपूर्ण ढङ्गले निको भएको त्यस मानिसको उमेर चालीस नाघिसकेको थियो। २३ मुक्त भएपछि उनीहरू अरू चेलाहरूकहाँ गए अनि मुख्य पुजारी र धर्म-गुरुहरूले आफूलाई भनेका सबै कुरा तिनीहरूलाई सुनाए। २४ यो सुनेपछि तिनीहरू सबैले एकसाथ परमेश्वरलाई यसरी प्रार्थना गरे: “हे सार्वभौम प्रभु, तपाईंले आकाश, पृथ्वी, समुद्र अनि त्यसमा भएका सबै कुरा बनाउनुभयो, २५ अनि तपाईंले पवित्र शक्तिमार्फत हाम्रो पुर्खा, तपाईंको सेवक दाऊदको मुखबाट यसो भन्नुभयो: ‘अन्यजातिका मानिसहरूले किन खैलाबैला मच्चाए अनि मानिसहरूले किन खोक्रा कुराहरूमा मनन गरे? २६ यहोवा अनि उहाँका अभिषिक्त जनको विरुद्धमा पृथ्वीका राजाहरू खडा भए अनि शासकहरूचाहिं एक ढिक्का भए।’ २७ यो कुरा साँचो हो, किनकि तपाईंको पवित्र सेवक, जसलाई तपाईंले अभिषेक गर्नुभयो अर्थात्‌ येशूको विरुद्धमा हेरोद,* पन्तियस पिलातस, अन्यजातिका मानिसहरू अनि इस्राएलका मानिसहरू यस सहरमा साँच्चै एकसाथ भेला भएका थिए। २८ तपाईंले आफ्नो तागत अनि इच्छाद्वारा पहिल्यै निश्‍चित गरिसक्नुभएको कुरा पूरा गर्न तिनीहरू त्यसरी एकसाथ भेला भएका थिए। २९ अब हे यहोवा, तिनीहरूको धम्कीलाई ध्यान दिनुहोस् अनि आफ्ना सेवकहरूलाई अझ निर्भयी भएर तपाईंको वचन बोलिरहन दिनुहोस्। ३० साथै, आफ्नो बाहुली फैलाएर निको पार्ने काम गरिरहनुहोस् अनि तपाईंको पवित्र सेवक येशूको नाममार्फत चमत्कार र आश्चर्यजनक कार्यहरू भइरहोस्।” ३१ तिनीहरूले उत्कट बिन्ती चढाएपछि तिनीहरू भेला भएको ठाउँ हल्लियो र तिनीहरू सबै पवित्र शक्तिले भरिए अनि निडर भएर परमेश्वरको वचन बोल्न थाले। ३२ यसबाहेक, येशूमाथि विश्वास गर्ने जति सबै जना एक चित्तका अनि एकै मनका थिए। कसैले पनि आफूसित भएको कुरा आफ्नै ठान्दैनथ्यो, बरु सबै कुरा तिनीहरूको साझा हुन्थ्यो। ३३ साथै, प्रभु येशू पुनर्जीवित हुनुभएको घटनाबारे प्रेषितहरूले अत्यन्तै प्रभावकारी साक्षी दिइरहे अनि तिनीहरू सबैमाथि परमेश्वरको असीम अनुग्रह प्रशस्त गरी बर्सिरह्यो। ३४ भनौं भने, तिनीहरूमध्ये एक जना पनि खाँचोमा परेन। किनकि ज-जससित खेत वा घर थियो, तिनीहरू सबैले ती बेच्थे र त्यसबाट आएको रकम लगेर ३५ प्रेषितहरूको चरणमा राखिदिन्थे अनि जहिले जसलाई खाँचो पर्थ्यो, त्यसैअनुसार वितरण गरिन्थ्यो। ३६ तब साइप्रसको रैथाने लेवी यूसुफ, जसलाई प्रेषितहरूले बर्णाबास भन्ने नाम दिएका थिए अनि जसको अनुवाद गर्दा सान्त्वनाको छोरा भन्ने अर्थ हुन्छ, ३७ तिनीसित एक टुक्रा जमिन थियो। तिनले त्यो बेचे र त्यसबाट आएको पैसा लगेर प्रेषितहरूको चरणमा राखिदिए।
^ प्रे ४:२७ * लूका ३:१ को फुटनोट हेर्नुहोस्।